TPLF: 'Paartiileen ibiddaafi cidii ta'an walitti makamuu hin danda'an' - BBC News Afaan Oromoo
Koreen jiddugaleessaa Adda Bilisummaa Uummata Tigiraay (TPLF) kora guyyoota torbaaf taa'aa ture xumuree ibsa baaseera.
Ibsa dheeraa addichi baasee keessaattis sochii ADWUI walitti makuun paartii tokko hundeessuuf taasifamaa jiru jabeessee balaaleffatee jira.
"Yaada siyaasaafi dambii ittiin bulmaataa ADWUI'n ala paartii walitti makame tokko uumuuf fiigichi fiigamaa jiru, sochii farra diimokiraasiiti" jedhe.
'Gara caalu soorama Mallasif kennamun of jiraachisaa ture'
"Paartiin uumamaa jiru bifa qofaan osoo hin taane, qabiyyeedhaanis sagantaa ADWUI irraa adda kan ta'e paartii haaraa uumuuf sochiin taasifamaa jira," jedhe.
Ummanni Itoophiyaa ADWUI kan filate sagantaa amma inni qabuuni. Paartii haaraa biyya akka bulchuuf uummataan itti gaafatamummaan itti hin kennamne uumuuf yaalamaa jira jedhe Addichi.
Ummataan aangoorra akka turu itti gaafatamummaan kan itti hin kennamne qofa osoo hin taane aangoo qabachuuf dorgomuu kan hin dandeenyedhas jedheera.
''Abiy Ahimad MM biyyattii guutuu ta'uu qaba''
Addi paartilee abiddaafi cidii walitti ta'an of keessaa qabu, paartii walitti makame yaa hafuutii adda ta'anii waliin itti fufuufillee yaada waloo hin qaban jedhe.
Miseensa Koree Hoji-raawwachiiftuu ADWUI kan ta'an Obbo Getaachoo Raddaa torban muraasa dura BBC'tti yeroo dubbatan, partiin biyya bulchaa jiru walitti makamuun paartii biyyaalessaa tokkicha ta'uuf deema jedhamee kan odeeeffamu 'TPLF' biratti tasa fudhatama hin qabu jedhanii turan.
Walitti makamuu Addichaa ilaalchisee bal'inaan dubbatamaa kan jirurratti 'TPLF' "Walitti makamuu akka kanaa aangoodhaaf jedhamee uumamu kana 'TPLF' gonkumaa hin fudhatu," jechuun Obbo Getaachoon ibsanii ture.
Obbo Getaachoo Raddaa akkas jechuunis ibsanii turan: "Paartileen miseensa Adda tokkoo ta'anii guyyaa guyyaan walqocolaa oolan qabannee rakkoo biyyaa hubachuudhaan furuudhaaf daandiin qabannee jirru yeroo walfaallessaa jirutti, paartii walitti makuuf fiiguun, dheebuu aangoo namoota muraasaa galma geesisuuf yoo ta'een ala paartiin rakkoo biyyattii furu ni uumama jedhee hin amanu 'TPLF".
Geetaachoo Raddaa: ''Abiy Ahimad MM biyyattii guutuu ta'uu qaba''
Siyaasa Itoophiyaa: Wal qoccoluu paartilee ADWUI fi egeree isaa
Itoophiyaa - lakkoofsi namoota koronaavaayirasiin qabamanii 29 gahe
Murtee Boordii Filannoo Biyyaalessaarratti paartileen siyaasaa maal jedhu?
Daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti maaltu mudate?
Sa'udiin galmeen imala Hajjii akka tursiifamu gaafattee
Namoonni 'matta'aan' bakka adda baasanii tursiifamuu keessaa bahan jiruu?
Weerarri koronaavaayiras akkamiin gabaa bunaa addunyaa jijjiiraa jira?
Biyyoota 5 hala hin baramneen 'uggura sochii' hojiirra oolchan
Appilikeeshinii warra nama COVID-19n qabamee waliin wal tuttuqan oolchu
Wal-qunnamtii saalaa fi Koronaavaayiras, wantoota beekuu qabdan